Cristiano Ronaldo oo laxaqiijiyey in Gabar kale uu ku Kufsaday London 2005 balse ay ku faraxsanayd? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo oo laxaqiijiyey in Gabar kale uu ku Kufsaday London 2005 balse ay ku faraxsanayd?
Published on October 7, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(08-10-2018) Waxaa soo baxay War kale oo sheegaya in Cayaaryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo uu geystey kufsi kale Sanadkii 2005 xili uu kusugnaa Magaalada London ee Caasimada Ingiriiska.
Nin caan ah oo lagu Magacaabo Vince Humphrey ayaa wargeyska The Sun u sheegay in uu lakulmay Gabar Ingiriiska ah oo uu xoogey Ronaldo Sanadkii 2005 balse ay u sheegtay in ay ku faraxsantahay in uu Kufsaday Xiddig Caan ka ah dunida isla Markaana aysan wax dacwad ah u qabsan doonin.
Cristiano Ronaldo ayaa xiligii uu xoogayey gabdhan labaad ee u dhalatay dalka England waxa uu kusugnaa five-star Sanderson Hotel oo kuyaala Magaalada London xiligaas oo ahayd sida lasheegay Sanadkii 2005.
Waa kiiskii labaad ee Kufsi ah ee lagu soo oogayo Cayaaryahan Ronaldo waxaana dhawaan lashaaciyey in uu kufsaday Gabar u dhalatay dalka Maraykanka oo lagu Magacaabo Kathryn Mayorga, 34,Sano jir ah iyada oo tiri xiligaas waxa uu joogey Magaalada Las Vegas waana 2009 kii.
Kathryn Mayorga, ayaa sheegtay in xiligaas ay ku wargelisey booliska dhacdadaan balse uu siiyey lacag dhan £287,000 uuna ka codsaday in ay qariso xiligaas oo ay 24 Sano jir ahayd.